Nosy Be : manohana ireo manan-kilema ny Cofestin | NewsMada
Nosy Be : manohana ireo manan-kilema ny Cofestin
Mandroso ny fikarakarana ny “Festival Donia” andiany faha-24. Nanao tatitra sady nanararaotra niresaka ny sehatra hafa, toy ny fanampiana ireo manan-kilema ao Nosy Be ny solontenan’ny Cofestin.
Fantatra indrindra amin’ny maha hetsika ara-kolontsaina lehibe indrindra aty amin’ny faritry ny ranomasimbe Indianina ny “Festival Donia”, fanao isan-taona any Nosy Be. Mivelatra amin’ny sehatra hafa, toy ny asa sosialy ihany koa anefa izany. Fantatra fa nitondra ny anjara birikiny amin’ny fanampiana ireo manana fahasembanana ao Nosy Be ny Cofestin, na ny komity mpikarakara ny “Donia”.
“Misy maro ireo manana fahasembanana ao Nosy Be. Menatra izy ireo miseho olona taloha, saingy hatramin’ny nisian’ny fikambanana, mba miezaka mioitra ho toy ny olona rehetra ihany. Ny sakafo izy misy manome ihany ny havany, fa ny lamba fitafy sy ny fandriana no tena manahirana ny ankamaroany”, hoy ny nambaran’i Amida Sanna, reny mpiahy ny fikambanan’ireo manan-kilema ao Nosy Be.
“Hisaorako manokana ny Cofestin tamin’ny fanohanana satria mitombo hatrany ka efa mahatratra 400 izy ireo amin’izao fotoana izao. Manao antso avo hatrany koa amin’ireo afaka manome tanana”, hoy hatrany ity reny mpiahy ity. Mpikambana ao amin’ny Cofestin rahateo izy.
Mirindra ny fikarakarana
Nandritra ny fihaonana tamin’ireo mpanao gazety vitsivitsy teto Antananarivo, nanambara ny solontenan’ny Cofestin fa efa mirindra tsara ny fanomanana ny andiany faha-24 amin’ny “Festival Donia”. Tontosa ny asabotsy teo, ohatra, ny fanaovan-tsonia ny fifanarahana teo amin’ny Cofestin sy ny mpanakanto Basta Lion. Anisan’ireo mpanakanto vao misondrotra, homen’ny “festival Donia” sehatra amin’ity izy. Ankoatra izany, fantatra ihany koa fa hisy ny mpanakanto vahiny andrasana, toy ny avy ao Maorisy, Botswana, sns. Ny azo antoka aloha, tsy maintsy i Fandrama no mamarana ny lanonana, araka ny angatahin’ny mponin’i Nosy Be.